'မှော်ဝင်သမန်းကျား' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြသခွင့်ရရှိ - Yangon Media Group
‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြသခွင့်ရရှိ
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
”မှော်ဝင်သမန်း ကျား” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီလ၌ ပြသမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို CARNIVAL Cinemas – Golden Mile Tower တွင် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်တို့တွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”အစ်မကလေ အရင်ကတည်းက ရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေက အက်ရှင်တွေ၊ ဒရာမာတွေ၊ သရဲဇာတ်ကားတွေပဲ ရိုက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ရုပ်ကကျတော့ ကျား ကာရိုက်တာ လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျား တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက် ကို လေ့လာခဲ့တယ်။ တကယ်လည်း ရိုက် ကွင်းမှာ သူ့အလိုလိုမုဒ်ဝင်ပြီးတော့ ကျား ပုံစံနဲ့ နီးစပ်သွားတယ်”ဟု သရုပ်ဆောင်၊ ထုတ်လုပ်သူ ခွန်းဆင့်နေခြည်က ပြောသည်။
‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် NC 16 နဲ့ Rating ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစနစ်ဖြင့် ပြသခြင်းမှာ ဇာတ်ကားအတွင်းကျားနှင့် လူပေါင်းစပ်သော ဇာတ်ဝင်ခန်းများ၊ က လေးမွေးသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်းနှင့် လူနှင့် သမန်းကျား စပ်မွေးထားသော ကျားမ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ရေချိုးသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်း များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘန်ကောက်၌ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ၌ ရုံတင်ပြသခွင့်ရရှိခဲ့သော ဇာတ် ကားလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)မှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် ရန် အောင်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ သူထူးစံ၊ စိုးမြတ် သူဇာ၊ လင်းဇာနည်ဇော်၊ ခွန်းဆင့်နေခြည် နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာတို့မှ ပါဝင်ထား သော ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားဖြစ်သည်။ ‘မှော်ဝင်သမန်းကျား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးသည် လူတစ်ပိုင်း၊ ကျားတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေသော သူတစ်ယောက်၏ ပုံစံနှင့် မိခင်မေတ္တာကို ဖော်ကျူးရိုက်ကူးထား သော ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားလည်း ဖြစ် သည်။
မြောင်းမြမြို့တွင် မြို့နယ်လေးမြို့နယ်ပူးပေါင်း၍ တပ်မတော်ထောက်ခံခြင်းနှင့် ပြင်ပစွက်ဖက??
'တစ်ကိုယ်တော် အခွေထဲမှာ လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ပုံစံလေးတွေ ထည့်ထားတယ်' Bobby Soxer
မန္တလေးသည် နယ်မြို့ပုံစံအတိုင်းသာရှိနေသေးပြီး ရန်ကုန်သည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအလွန်ကြီးမားလာကြောင်
တိုင်းအစိုးရ၏ ကျောင်းကားအစီး ၂ဝဝ ကိစ္စ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် ရှေ့
မွန်ပြည်သစ် ပါတီမှ NCA သဘောတူ စာချုပ်တွင် ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်?
အော်စကာဆု ချီးမြှင့်မည့် အနုပညာရှင်စာရင်းတွင် မင်းသမီးကြီး ဟယ်လင်မီရန်းကို ထည့်သွင်း